Hand push စပါးမျိုးစေ့လက်စွဲဖြင့်ရောင်းချသည့်ပေါင်းပင်စက်
စပါးစိုက်ပျိုးသည် ,ပေါင်းပင်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အထွက်နှုန်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များဆုံးရှုံးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်, နှင့်ကောင်းမွန်သောစပါးကိုအရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရန်. ပေါင်းပင်များကိုတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်လက်ဖြင့်ကြဲခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်, နှင့်လက်တွန်းအားပေး weeder နှင့်အကြားစိုက်ပျိုးမှုပေါင်းပင်များကဲ့သို့သောကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ စက်မှုပေါင်းသင်ခြင်း.
ဤလက်တွန်းအားပေးသောစပါးမျိုးစေ့သည်ဆန်စပါးကိုလယ်ကွင်းတွင်ပေါင်းသင်းရန်သင့်လျော်သည်။ ပေါင်းသတ်ဆေးအသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ရန်, ပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးမြေဆီလွှာကျုံ့ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်. manual လည်ပတ်သည့်ပေါင်းပင်စက်သည်အော်ဂဲနစ်ဆန်ကိုစိုက်ပျိုးရန်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်,သေးငယ်သည်, အလေးချိန်ပေါ့, ပြောင်းရွှေ့ရန်လွယ်ကူသည် ,အရာစိုက်ပျိုးရေးများအတွက်ချွေတာခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျသောဖြစ်ပါတယ်.
2.မြင့်မားသောထိရောက်မှုပေါင်းပင်, လွင်ပြင်များအတွက်သင့်လျော်သော, တောင်ကုန်းများ, လှေကားထစ်များ, တြိဂံနှင့်အခြားသေးငယ်တဲ့ကွက်ရွှံ့လယ်.
3.သေးငယ်ပြီးပေါ့ပါးသောလက်စွဲစာအုပ် weeder စက်,လည်ပတ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်,ရွေ့လျားရန်လွယ်ကူပြီး၊.
4.ပေါင်းပင်များသည်နက်ရှိုင်းပြီးရေတိမ်ပိုင်းဖြစ်သည်, ထောင့်ချိန်ညှိသည်, အဆိုပါကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အများဆုံးကန့်သတ်လူအင်အားအသုံးပြုမှုနှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်.
5.စက်သည်အတန်းလိုက်ကောက်ခြင်းနှင့်လယ်ထွန်ခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ရိုးရာပေါင်းပေါင်းများစွာထက်လုပ်အားကိုချွေတာသုံးစွဲနိုင်သည်, လမ်းလျှောက်ရန်တွန်းအားပေးပါ။ ခါးမနာပါ။ လက်ဖြင့်ပေါင်းပေးသည့်စက်သည်ရိုးရှင်းပါသည်, ဒါကြောင့်များစွာသောနည်းစနစ်များပါရှိသည်.
အလုပ်လုပ်အနက် 12~ ၂၀ စင်တီမီတာ
width ကိုကိုင်တွယ်ပါ 45စင်တီမီတာ